Yintoni i-API, REST, SOAP, XML, JSON, WSDL kunye nezinye iinkcazo
Ima ngantoni i-API? Kwaye ezinye iiAcronyms: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
NgoLwesine, Septemba 24, 2015 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, 2017 Douglas Karr
Xa usebenzisa isikhangeli, isikhangeli sakho senza isicelo kwiserver yabaxumi kwaye iseva ithumela iifayile ekubuyiseleni umkhangeli wakho kwaye zibonise iphepha lewebhu. Kodwa uza kuthini ukuba ufuna iserver okanye iphepha lewebhu ukuba lithethe kwenye iseva? Oku kuyakufuna ukuba udwelise ikhowudi kwi-API.
Ingaba yin API mela i?
I-API sisifinyezo se IsiNxulumanisi soLungiselelo lwe-Aplikheyishini yokwenziwa kwemiYalezo. An API iseti yeendlela, iiprothokholi, kunye nezixhobo zokwakha ezisebenza ngewebhu kunye nezicelo ezisekwe kwiselula. Inkqubo ye- API icacisa ukuba ungangqinisisa njani (ngokuzithandela), ucele kwaye ufumane idatha kwi API iseva.
Xa isetyenziswa kwimeko yophuhliso lwewebhu, i API Ngokwesiqhelo iseti echaziweyo ye-Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yemiyalezo, kunye nenkcazo yesakhiwo semiyalezo yokuphendula Ii-API zewebhu zivumela ukudityaniswa kweenkonzo ezininzi kwizicelo ezitsha ezaziwa ngokuba zi-mashups.Wikipedia
Inkcazo yeVidiyo yee-APIs ezenzayo
Zimbini iinkqubo eziphambili xa usenza i-API. Iilwimi ezisesikweni zokuprograma ezinje ngeMicrosoft .NET kunye nabaphuhlisi beJava bahlala bekhetha i-SOAP kodwa eyona protocol ithandwayo REST. Ngokufana nokuchwetheza idilesi kwisikhangeli ukufumana impendulo, ikhowudi yakho idlulisa isicelo kwi API Ngokwenyani umendo kwiseva eqinisekisa kwaye iphendule ngokufanelekileyo kwidatha oyicelileyo. Iimpendulo ze-SOAP ziphendula ngeXML, ejongeka kakhulu njenge-HTML-ikhowudi esetyenziswe sisikhangeli sakho.
Ukuba ungathanda ukuvavanya ii-API ngaphandle kokubhala umgca wekhowudi, I-DHC inkulu Isicelo seChannel Ukunxibelelana neeAPIs kunye nokubona iimpendulo zabo.
Ima ngantoni i-Acronym SDK?
I-SDK sisifinyezo se Isoftware yonjiniyela.
Xa inkampani ipapasha i-API yayo, kukho amaxwebhu ahamba kunye nawo abonisa indlela API iyaqinisekisa, inokubuzwa njani, kwaye zeziphi iimpendulo ezifanelekileyo. Ukunceda abaphuhlisi bafumane ukuqala kwentloko, iinkampani zihlala zipapasha Isoftware yonjiniyela ukubandakanya iklasi okanye imisebenzi eyimfuneko ngokulula kwiiprojekthi ezibhalwa ngumphuhlisi.
Ima ngantoni iAcronym XML?
IXML sisifinyezo se Ulwimi lweMarkup. IXML lulwimi olusetyenziswayo ukufaka idatha kwifomathi enokufundwa ngabantu kunye nokufundeka ngomatshini.
Nanku umzekelo wendlela iXML ebonakala ngayo:
<?xml inguqulelo ="1.0"?>
<product i-id ="1">
Imele ntoni iAcronym JSON?
Nanku umzekelo wedatha engentla usebenzisa iJSON:
"isihloko": "Imveliso A",
"inkcazo": "Imveliso yokuqala",
Imele ntoni iAcronym REST?
REST sisichazi segama Ukumelwa koRhulumente oMeleyo Uhlobo loyilo lweenkqubo ezisasaziweyo zehypermedia. Ebizwa njalo nguRoy Thomas Fielding
Wowu ... umphefumlo onzulu! Ungayifunda yonke dissertation apha, ebizwa ngokuba yiZimbo zoYilo kunye noYilo lweSoftware esekwe kwi-Software Architecture ezingenisiweyo ukoneliseka ngokuyimfuneko kwiimfuno zesidanga SOGQIRHA WEFilosofi kuLwazi nakwiNzululwazi yeKhompyutha ngu URoy Thomas Fielding.
Enkosi uGqirha Fielding! Funda ngakumbi malunga ABANYE kwiWikipedia.
Ima ngantoni iAcronym SOAP?
I-SOAP sisifinyezo se Inkqubo elula yokuFikelela kwinto
Andinguye umdwelisi weenkqubo, kodwa ngokoluvo lwam abaphuhlisi abathanda i-SOAP benza njalo kuba banokuphuhlisa ngokulula ikhowudi kwindlela yokusebenza yomgangatho esemgangathweni efunda ifayile yeWebhu yeNgcaciso yoLwimi (WSDL). Akudingeki ukuba babonakalise impendulo, sele ifezekisiwe kusetyenziswa i-WSDL. I-SOAP ifuna imvulophu yenkqubo, echaza ubume bomyalezo kunye nendlela yokuwuqhuba, iseti yemigaqo yokufaka iikhowudi ekubonakaliseni iimeko zeedatha ezichaziweyo zesicelo kunye nendibano yokumela inkqubo yeefowuni kunye neempendulo.
I-Amplero: Indlela eNgcono yokuNciphisa uMthengi
Enkosi ngezi ngcaciso ezisisiseko.
Sep 26, 2017 kwi-11: 33 AM
Oku kuhle enkosi mnumzana ngolu lwazi.
Dec 6, 2017 ngo-1:13 PM
Ndiyabulela ngokuthumela olu lwazi-ndiye ndazibuza ukuba ithetha ukuthini i-REST ixesha elide! 🙂
Dec 13, 2020 ngo-6:44 PM
Okokugqibela (ekugqibeleni!) Isishwankathelo esifutshane sentsingiselo yazo zonke ezi zishunqulelo zangaphambili zothusayo. Enkosi ngokusebenzisa ulwimi olucacileyo noluthe ngqo, isiphumo = ikamva elikhangeleka liqaqambile kancinane kulo mphuhlisi wabafundi.
Dec 14, 2020 ngo-3:40 PM
Molo Vic, ewe… Ndiyavuma. Amazwi ayoyikeka. Ndikhumbula okokuqala ndicwangcisa isicelo kwi-API kwaye yonke yacofa kwaye andizange ndikholelwe ukuba kulula kangakanani. Enkosi!